Igoli entanyeni ngemuva
Uma, lapho kuqhutshwa ukuvuthwa okuvamile noma ukuxuba, inhlama ngemuva kwentamo itholakala, ngisho nomuntu othulile angethusa. Ukuvakashela kudokotela, uma kubonisiwe, kungaba yingozi ukuhlehlisa imfundo enjalo, noma kunjalo, emaphethelweni ngemuva kwentamo kungenzeka kube nezizathu ezingenacala ngokuphelele.
Ukuvuvukala kwe-lymph node
I-cone ngemuva kwesokudla noma kwesobunxele endaweni ye-lymph nodes ingaba isibonakaliso sokuqala se-tumor ebulalayo. Kulesi simo, ukubunjwa kwesibindi nokuhlala phansi, ngokucindezelwa kuye, ubuhlungu abuzwa:
I-Lymphogranulomatosis - ngemuva kokubandakanyeka kwe-lymph node endaweni eyodwa (ngokuvamile kaningi entanyeni), ukushisa okuphezulu kubonakala ngaphambi kwe-aspirin, imithi elwa namagciwane, engenamandla. Phakathi kwezibonakaliso zokuqala zesisu kukhona isikhumba esibi, esingasuswa nanoma yimiphi imithi.
I-leukemia ye-lymphatic - ngaphezu kokunqotshwa kwama-lymph nodes entanyeni, ukujuluka, ubuthakathaka, ukumelana nokutheleleka kokutheleleka, ukuvama esiswini (ngenxa yesilonda se-spleen).
Ngaphandle kokuba uhlale unomsoco ongenhla emqaleni, uphawu lwe-oncology, kodwa kusadingeka ukuba udokotela ohlinzayo avele.
Ngendlela, ukuvuvukala kwama-lymph nodes nakho kungabheka kwangaphandle njenge-bump-ukucindezela kukho kubangela ukuzwa okubuhlungu. Isizathu salesi simo sibanda noma sinciphise kakhulu emzimbeni.
I-Lipoma noma i-Wen
Isizathu esivame kakhulu sokubonakala kwesidonsa ngemuva kwethambo amafutha, okwelashwa okungadingeki ngaso sonke isikhathi. Leli qhinga elibi kakhulu libizwa ngokuthi i-lipoma, kodwa liqoqa izicubu ze-adipose ngaphansi kwesikhumba. Njengoba i-palpation, ihamba kalula ngaphansi kwesikhumba, ngaphandle kokubangela ubuhlungu.
Ukugqoka izingubo eziqinile kungabangela ukungahambi kahle, ngaphezu kwalokho, i-lipoma iyisici esiphundu sezithokozi. Imfundo ingasuswa ngokuhlinzwa, kepha ayibe yingozi empilweni nasezempilo, ngaphandle uma ikhula ngesivinini esisheshayo. Isizathu siyizinto eziphawulekayo ze-metabolism, okuyincike kakhulu ekutheni ifa lifa.
I-Fibrolipoma ibizwa ngokuthi i-benign formation, okuyinto ekubukeni ayifani neze ne-wen futhi iqukethe inhlanganisela yamathambo namafutha anesibindi. Ukuphumula okunjalo ngemuva kususwe yi-liposuction noma ukuhlinzwa.
I-Atheroma yi-cyst cyst sebaceous. Ibuye ibonakale njenge-bumpkin eduze kwe-scalp futhi ine-flexible, e-elastic stretching, ayibangeli ubuhlungu, kodwa ingafakwa festered, ngakho-ke idinga ukususwa.
Kubukeka kancane kancane ngemuva kwetanyeni, okulimazayo, okuvezwa ngokukhethekile uma ucindezela - lokhu cishe kunamathumba.
Ngokuveza ukuvuvukala kwesifo sezinwele ze-hair follicle, ubilise kungenzeka ngenxa yokuhlukumezeka ngokutheleleka noma ukungahambisani nemithetho yokuhlanzeka. Kubangelwa, njengomthetho, nge-staphylococcus aureus yegolide.
Phakathi nendawo ye-furuncle "ekhulile" iyisitshalo esine-purulent enenhloko emnyama. Ubuso be-cone enjalo lubhaniswa nezixazululo zesifo se-antiseptic. Lapho ubilise luvula, isilonda siphathwa ngesisombululo se-hypertonic (i-sodium chloride), ukubopha okuboshwe kuyasetshenziswa.
Uma unomsola ngemuva komgogodla, ungakhathazeki: lokhu kuvamile phakathi kwabesifazane abaneminyaka engaphezu kwengu-35 ubudala, okwenziwe ngokomzimba. I-cone isakhiwe ngenxa yokuqiniswa kwemisipha noma ngokuphambene nalokho - indlela yokuphila yangasese, eholela e-osteochondrosis. Esinye isizathu - umsebenzi owandayo we-adrenal gland kanye nokwakhiwa kwalokho okubizwa ngakho. "Buffalo hump," okwenzeka kubesifazane ekucindezelekeni okuqhubekayo.
Ukwakhiwa okunjalo kungabangela ukungakhululeki, futhi ukusikhipha kungasiza ekuyisuseni. Iwusizo kakhulu yizigaba ze-yoga.
Vinpocetine - izinkomba zokusetshenziswa
Streptococcus - ukwelashwa
Ulcer Isisu - Izimpawu
I-Phenibut - efanayo
Ukuhluka kwesilinganiso senhliziyo
Ukulala okunamandla - ukwelashwa kokulala nokulala
I-ultrasound ye-gland gland - ukulungiselela
Izifo zesimiso sezinzwa
Izimpawu eziningi ze-Sclerosis
Ukunakekela izitshalo zasendlini ebusika
Indlela yokwenza impisi ingaphandle kwe-plasticine?
Isitayela se-Gothic ngaphakathi
Ukuphumelela kwesisindo sokulahlekelwa umzimba
Ngenxa yenkazimulo, unina kaKim Kardashian wathengisa izithombe zakhe ezingcolile zobulili
Indlela yokulungisa i-greenhouse ebusika emva kosawoti?
Ukuzivocavoca umzimba wokuphila isikhathi eside
Indlu enefasitela e-panoramic
Kungakanani ukupheka ingulube?
U-Justin Bieber uthatha isithakazelo esijulile kumuntu ongaziwa kahle
Ikhukhi elifushane - iresiphi
Yini okufanele ugqoke lofers?
Indlela yokubeka i-slab yokubamba?
Yini okufanele ugqoke i-swtshot?
Izimpawu Zokuhlasela Inhliziyo
Yini okufanele ngiyithathe ngokucindezela okuphansi?
Ukukhishwa kwegazi ngemva kokulala
Ingubo kaKoresi Plate
Namacici Swarovski - ukukhethwa kwezithombe zamacici amahle nge amakristalu Swarovski